Ogaden News Agency (ONA) – Dabaqodhiga iyo cabdulahi Ethiopia oo Filim qarsodi ah laga duubay iyo calaalkooda daawo
Dabaqodhiga iyo cabdulahi Ethiopia oo Filim qarsodi ah laga duubay iyo calaalkooda daawo
Waxaa laga duubay filim qarsoodi ah Ninki dulliga ahaa ee watay oo ka hadlaya sida loo fashiliyay shirkiisii. Hadaba waxa uu ka hadlaya sida jaaliyada somalida Ogadeniya ee wadanka Australiya u fashiliyeen shirkoodi.
waxa Cabdullaahi Itoobiya oo ah nin dad badan ku xasuuqay ogadneiya weerar ku qaaday socdaalkisi xubno ka tirsan jaaliyada somalida ogadeniya ee wadanka Australiay. Waxayna albaabada u laabeen shirki qarsoodiga ahaa ee ay isugu yimaden. cabdulahi Ethiopia oo ah Hoggaanka nabadgalyada ninka u qaabilsan gumeysiga xasuuqa ogadeniya ayaa loo soo diray safar sidii uu dadka ogadeniya ee ku nool dibada ugu sheegi lahaa inay aqoonsadaan gumeysiga, isna dhiibaan. balse gabdho iyo wiilal u dhashay ogadeniya ayaa ku yiri duliyahow dhulkaaga ka daa dulmiga oo shirkii ku dhagax tuuray waxa la socday wiil yar oo isna lagu magacabo maxamud xaaji cabdi shakuur waxayna u fakadeen magaalo kale oo kamid wadanka Australiya halkaas oo dhumaleys ay ku joogaan.
cabdullahi Ethiopia iyo maxamuud cabaadka ka baxaya halkan hoose ka daawo.
isaga oo sheegaya. wadan aadsan maamumulin markaad timado dhibaato badan ayaad la kulmi. Gabdhihi iyo wiilashii isoo weeraray waxaaba soo galiyay dad kamid ah kuwi howsha aan u dhiibtay inay qaban qaabiyaan. Qabiil qabiil ayaan dadka ula kulmayna. iyo dhaqan xumo badan oo ay ka hadlayaan daawo. Waxa uu qirtay cabdullahi Ethiopia innuu masuul ka yahay dadka ay laayeen Liyuu Polisku, anaa masuul ka ah dhibaatada liyuu poliska.
Cabdullahi Ethiopia waxa uu u heysta Australia Jeel Ogadenki uu dadka ku guri jiray. Waxase uu oggaaday inuu meel halis ah joogo. Waxaana uu ku jira dhuumaleys eega oo qofkasta waxa uu modaya kii shirqolayay.